watchOS 4 inokutendera iwe kushandisa iyo Apple Tarisa sechiedza | Ndinobva mac
watchOS 4 inokutendera iwe kushandisa iyo Apple Watch sechiedza
Zvishoma nezvishoma, nhau idzo Apple ichaunza kune vese Apple Watch neiyo itsva watchOS 4 inoshanda sisitimu iri kuzivikanwa. Iyo ficha yatiri kuzokuudza nhasi Izvo zvaive zvisipo mukutanga kwayo mune yekushandisa system yeiyo iPhone pachayo. uye pakanga pasina kusvika makore mashoma apfuura kuti yakaverengerwa mavari.
watchOS 4 ichaita kuti zvive nyore kwenguva yekutanga Apple Watch inogona kushanda sechiedza sezvo iko iko iko skrini iriko pane mamwe mamodheru e iPhone ekushandisa semberi kamera flash.
Mune iPhones, mamwe masisitimu anoshanda apfuura, iyo flash kumashure yaishandiswa sechiedza icho Apple yakawedzera bhatani kune inotsvedza nzvimbo yepakati pekrini kuti iite iyo flash. Nekusvika kweiyo 3D Kubata, chiratidzo chakawana simba uye nekucherechedzwa kwekubata kwekunzwa kwechidzitiro iyo yakaburitswa neyekutanga Apple Watch iwe unogona kusarudza kukwirisa kwetochi.
Iye zvino, mune inotevera vhezheni yeApple Watch system, ndiko kuti, iyo watchOS 4 inouya mashandiro matsva ayo anotibvumidza isu kushandisa iyo Apple Watch sechiedza. Kune izvi, iyo sisitimu, hongu, haizokwanise kushandisa yakavakirwa-mukati nekuti iyo pfungwa yewachi pachayo haina chinhu cherudzi urwu chakabatanidzwa uye ndosaka avo veCupertino Ivo vafunga zano rakafanana rekuti ungawana sei iyo flash yekamberi kamera yeiyo iPhonendiko kuti, kuburikidza nechidzitiro pachacho.
Neichi chikonzero, patinotsvedza munwe wedu kubva pasi kuenda kumusoro paApple Watch skrini tichava nechiratidzo chitsva mukudonhedza uko kuchange kuve nekudhirowa kwetochi uye kana tikadhinda tichaona kuti chidzitiro chedu Apple Watch yakavhenekerwa zvizere muchena, chena yakajeka zvekuti munzvimbo dzine rima inogona kushandiswa sechiedza chemwenje.
Nekudaro, pano hazvisi zvese uye isu tichava nemitatu mikana yakasiyana neiyi tochi modhi. Kana isu tikadzvanya iyo icon munzvimbo yekudzora, iyo skrini ichavheneka chena uye iyo nguva ichaonekwa muchikamu chepamusoro mune zvidiki uye muchikamu chepazasi matatu matatu anotiratidza dzimwe sarudzo mbiri dzichange dziripo, dzinova, mukana wechiedza chinobwaira kutiita kuti tiratidzike mune mamwe mamiriro ekunyanyisa uye sarudzo yechitatu yaizovhenekera chidzitiro nezvitsvuku kuti isazokanganisa zvakanyanya kana tikazviita munzvimbo yatisingakwanise kuburitsa mwenje wakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4 inokutendera iwe kushandisa iyo Apple Watch sechiedza
Ona Zon akadaro
Mumwe munhu anogona kundiudza izvo zvakasvibira maLED kumashure ari? Dzimwe nguva vanovhenekera uye ini handizive kuti ndeyei
Pindura Ver Ver
Iwo maLED aunoona kumashure ndiwo maseru ayo Apple Watch iri kuyera kupomba kwako. Nguva dzese dzaunovaona dziripo, iri kuyera moyo wako.